मंसिर १५ देखि सर्वसाधारणले ई-पासपोर्ट पाउने, पृष्ठ अनुसार कति तिर्नु पर्छ शुल्क ? - Khabar Center
मंसिर १५ देखि सर्वसाधारणले ई-पासपोर्ट पाउने, पृष्ठ अनुसार कति तिर्नु पर्छ शुल्क ?
राहदानी विभागले विद्युतीय राहदानी (इ. पासपोर्ट) सार्वजनिक गरेको छ। बुधबार सताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीलाई पहिलो विद्युतीय राहदानी हस्तान्तरण गर्दै विभागले ई-पासपोर्ट सार्वजनिक गरेको हो।
आजदेखि केन्द्रीयस्तरमा जारी भएको इलेक्ट्रोनिक पासपोर्ट मंसिर १५ गतेदेखि देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी हुनेछ। यसअघि नेपालमा ६ प्रकारका मेसिन रिडेबल पासपोर्ट जारी गरिँदै आएकोमा विद्युतीय पासपोर्ट पनि ६ रंगमा जारी हुनेछ। सर्वसाधारणलाई चकलेटी रंगको पासपोर्ट वितरण गरिनेछ।
विभागले ६ प्रकारको ई-पासपोर्ट जारी गर्न लागेकोमा ३४ पृष्ठको राहदानी नियमित प्रक्रियाबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नियोगमार्फत बनाउँदा ५ हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ। यस्तै ६६ पृष्ठका लागि भने १० हजार रुपैयाँ शुल्क विभागले निर्धारण गरेको छ।
आपतकालीन अवस्थामा दुई दिने सेवा अवधिभित्र पासपोर्ट बनाउँदा ३४ पृष्ठको १२ हजार र ६६ पृष्ठको २० हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ। राहदानी हराएमा, केरमेट भएमा वा अन्य कारणले प्रयोग गर्न नमिल्ने भएमा नयाँ बनाउन पाँच हजार शुल्क लाग्ने विभागले जनाएको छ।
प्रकाशित मिति :मंसिर २ २०७८ बिहिवार - १४:३८:०५ बजे